के म ब्याकइन्ड खोजशब्द अनुकूलन संग मेरो अमेजन बिक्री रैंक बढाउन सक्छु?
छोटो उत्तर हाँ हो, ब्याकइन्ड खोजशब्द अनुकूलनको साथ अमेजन बिक्री को दर बढ्न सम्भव छ. निस्सन्देह, जब यो सही तरिका संभाला छ. यसकारण, म अमेजन उत्पाद पेजमा विशेष रूपमा अनुकूलित ब्याकइन्ड खण्डमा तपाईको मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू प्रयोग गरी - "सर्त सर्तहरू" भनिन्छ - मार्फत मेरो अमेजन विक्रय श्रेणीको मूल्याङ्कन गर्नका लागि आवश्यक केही टेक्निकल ज्ञानलाई साझा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।. "यो तरिका, तपाईं पाईको निश्चित निश्चित टुक्रा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ, तुलनात्मक रुपमा तपाईले पनि यो हल्का विरोधका कारणले यो अमेजन बिक्रीको क्षमता बढाउनको लागि सुनको अवसरलाई बेवास्ता गरेका छन्। गहन कामहरू - kanger pro tank3coil rebuilding. त्यसो त, तल म तपाईंलाई देखाउन जाँदैछु तपाईंको अमेजन सूचीकरण कसरी यसको ब्याकइन्ड किबोर्ड खोजशब्द द्वारा संरचना.
ब्याकइन्डका लागि अनुकूलन अनुकूलन
के तपाईंलाई थाहा छ कि अमेजन द्वारा निर्धारण गरिएका नियमहरूको निर्दिष्ट सेट त्यहाँ - ठीकतपाईँको उत्पादन सूचीको ब्याकइन्ड खण्डको लागि? निम्नमा सबै ठाउँमा राख्नुहोस्, र A9 को लागि तपाईंको अमेजन बिक्रीको वृद्धि बढाउन अर्को राम्रो कारण हुनेछ.
तपाईले प्रत्येक ब्राउजरलाई अर्को ब्याकइन्ड खण्ड भित्र अर्को पछाडि विभाजन गर्न मात्र खाली ठाउँहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।. मेरा मतलब छ कि कुनै पनि अन्य प्रतीकहरू जस्तै कमसमा वा अर्कोक्रोनहरू त्यहाँ अनुमति छैन.
हरेक कीवर्ड वा लामो-टाई खोज वाक्यांशलाई स्पष्ट, तार्किक क्रममा ढाँचाबद्ध गरिनु पर्छ ताकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा पढ्न योग्य तरिकामा प्रदर्शित हुन्छन्।. उदाहरणको लागि, "ठूलो रेड कालीन" जस्तै स्पष्ट अभिव्यक्ति राम्रो छ, जस्तै "रातो ठूलो कालीन" जस्तै तपाईंको उत्पादन सूचीको लागि कहिल्यै राम्रो हुनेछैन।.
तपाईं दायाँ संक्षिप्तिकरणहरू प्रयोग गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ (उदाहरणका लागि, पुस्तकहरू, चलचित्रहरू, आदि. ), साथ नै अन्य कुनै पनि आम स्वीकार्य विकल्पहरू.
कुन कुराबाट टाढा हुनु पर्दछ
यो नो-ब्रेनर जस्तो लाग्न सक्छ, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग कुनै अप्रासंगिक, गलत वा खुल्ला भ्रामक जानकारी तपाईंको मा समावेश छ। "शब्द सर्तहरूको ब्याकइन्ड सूचीबद्ध सेक्शन. "मेरो मतलब छ कि तपाईले तपाइँको उत्पादन सूचीलाई गलत वस्तु श्रेणीमा कहिल्यै पोस्ट गर्नुपर्दैन, अनुपयुक्त शब्दहरू (सन्दर्भको बाहिर), गलत लिङ्ग, र त्यसमा प्रयोग गर्नुहोस्।.
UPCs को प्रयोग गरेर, वस्तु एएसआईएनहरू, उत्पाद नामहरू वा कुनै अन्य वस्तु परिचयकर्ता तपाईंको ब्याकइन्ड किबोर्डहरू हेर्न त्यहाँ दृढ अवांछनीय छ।.
कुनै अमूल्य लामो सामग्री सिर्जना गर्नाले तपाईंको अमेजन विक्रय रेट वृद्धि गर्न भन्दा बढी हानि गर्नेछ.
व्यक्तिपरक शब्दहरू जस्तै "अद्भुत गुण," वा कुनै अन्य खुलाली प्रचार शब्दहरू र "उत्तम सम्झौता," "कम मूल्य" जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि सिफारिस गर्दैनन्।.
उस्तै कुरा कुनै पनि समयमा निर्भर बयानहरू, जस्तै "बिक्रीमा," "नयाँ उत्पादन उपलब्ध," "सीमित स्टक," आदि।.
कुनै पनि आक्रामक सन्देश वा निश्चित रूपमा अपमानजनक प्रकृतिको शब्द दृढता निषेध गरिएको छ.
कुनै पनि गलत मिल्दो उत्पादन नामको उद्देश्ययोग्य उपयोग पनि कुनै पनि खराब विचार होइन (भले यो गलत मिल्दो शब्द वा अभिव्यक्ति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खोजशब्दहरू छन्).
कुनै पनि हिज्जे विविधताहरू, जस्तै एकल / बहु रूपहरू वा क्यापिटलाइजेशनका विभिन्न तरिकाहरू समेत तपाईंको फायदाको लागि कहिल्यै गिन्नेछैन.